Sare Lacagta Fikradaha Muhiim u ah si wax looga qabto weerarrada Hacking
Hab kasta oo ganacsi e-ganacsi wuxuu u baahan yahay heer amaan ah oo amaan ah. Wixii milkiilaha bogga,Ka fogaanshaha qawaaniinta waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee xirfaddaada. Xaaladaha badankood, koodhiyeyaashu waxay bartilmaameedsadaan goobo si ay ula tagaanmaamulka xakamaynta maamulka iyo sidoo kale macluumaadka muhiimka ah ee ka jira bogagga shabakadda. Macluumaadkan waxaa ku jiri kara macluumaadka macaamiil qiimo lehxogta kaararka deynta.
Dib u soo celinta website-kaagu wuxuu noqon karaa wax fiican oo la sameeyo - japan vps cheap. Waxaad mar walba heli kartaa soo laabashohaddii ay dhacdo in dhammaan geeddi-socodka uu yimaado hoos u dhac. Nabadgelyada macluumaadka macaamiishaagu waxay kuugu jiraan gacantaada sida website-ka shirkaddaadmin. Natiijo ahaan, waxaad u ogolaataa hawsha Raadinta Mashiinka Raadinta oo dhan iyo nidaamyada si ay u yimaaddaan hoos u dhac.
Jack Miller, oo ah Maamulaha Guusha Macaamilka Sare Sare ,sharaxay qaar ka mid ah siyaabaha looga ilaaliyo boggaaga internetka:
Isticmaal erey sir ah
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu hubin karo amniga goobtaada waa iyada oo loo marayo isticmaalkasirta nabdoonaanta. Khariidad kasta waxay ku bilaabataa hawsha isku dayaysa in ay qiyaasto erayga sirta ah. Aqoon iswaydaarsiga sida 12345 waa ammaan la'aan oo noqon kara qofmaleyn fudud Sidoo kale caqli ma aha in la isticmaalo erayada qofku sheegi karo. Qof kasta oo ku soo galaya website-kaaga wuxuu u baahan yahay inuu helo lambar sir ah. Aerayga daciifka ah wuxuu kordhiyaa nuglaanta boggaaga internetka si loo hirgeliyo.
Qaar ka mid ah websaydhada liidata ee liidata waxay u nugul yihiin waxoogaa raqiis ah. Marka la qorsheynayogoobtaada, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qaab-dhismeedka cod-bixinta oo aan oggolaan karin in wax laga galo meelo kala duwan. Tusaale wanaagsan waa qaar ka mid ah bogagga internetka.Website-yadu waa ammaan darro in ku dhawaad ​​qof kasta oo qalab Linux ah hubaal ka heli karo database-ka. Waxaa intaa dheer, qalab fudud sida Havij amaBixinta Jadwalka Browser (BeeF) waxay awoodi karaan inay galaan macluumaadka qadka tooska ah iyada oo aan loo baahnayn isticmaalka lambarka sirta ah.
Isticmaalida ilaalinta lakabka sare ee URL-yada waxay hubin kartaa isticmaalayaashaaga qaar ka mid ahisku dayga ugu fudud ee hack. HTTPS waxay caawin kartaa qofku inuu leeyahay badbaado iyo amniga marka uu bixinayo macluumaad shakhsi ahaaneed oo qarsoodi ah website-ka. Taninooca amniga looma suurtageli karo qawaaniinta kale ee internetka martigelinaya. Waxa kale oo muhiim ah in dareenka lagu marti geliyo dadka martida ah ee ku saabsan nabadgelyada noocaas ah.
Isticmaal khadadaha amniga.
Markaad martigelineyso website-ka iyo automating SEO, waxaa jira qaar ka mid ah plugins oo awoodi karahubi hawlgalkaaga internetka. Tusaale ahaan, dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan qalabka nabada ee "BulletProof Security Security" ama xitaa IThemes Security. Qalabkani wuxuu noqon karaakala sooco jasiirad kasta oo ka jirta goob kasta ama barnaamijka codsiga.
Ammaanka bogga iyo macaamiishiisa waxay ku tiirsan yihiin awooddiisa inuu ka fogaadojilayaasha. Hackers waxay bartilmaameed u noqon karaan waxyaabo kala duwan. Marka ugu horeysa, waxay ka tirsanaan karaan shirkad tartameysa isku dayaysa in ay keenaan goobtaadahoos. Xaaladaha kale, waxaa laga yaabaa inay yihiin dad ujeedadoodu aysan caddayn laakiin waxay kalsooni ku tahay inay ka dhexmuuqaan sida ay shirkaddu u shaqeyso.Sidaa darteed, waxay noqon kartaa arrin lagama maarmaan ah in laga fogaado qawaaniinta, gaar ahaan laga soo xigtay bogga internetka. Tilmaan-bixiyahan ayaa kaa caawin kara inaad gaartotan markaad sameyso amaanka goobtaada xooggan. Intaa waxaa dheer, macaamiishaadu waxay ahaan karaan kuwo ammaan ah.